Yakavanzika Yakatemerwa Miganhu-ye-Shandisa Cannabis Bhizinesi Attorneys
Stumari, LLC. Mashandisiro Ekushandisa
Inoshanda kubvira Chikunguru 11, 2018
Kuti zvive nyore kwauri, Stumari inopa iyi pfupiso yeMitemo Yedu yekushandisa mune isiri-yekusunga pfupiso yemhando pamwe neiyo yakazara-yakasungirwa Mitemo Yekushandisa pakarepo ichitevera iyi Mitemo yekushandisa Summary. Ndokumbira unzwisise kuti ichi hachisi chizere chakakwana cheStumari Mirairo yekushandisa; iko kuongorora kwekodzero dzakakosha dzemushandisi nemitoro. Ndokumbirawo kuti muverenge zvese zveMutemo wekushandisa gwaro nokungwarira. Uye zvakare, ndapota cherekedza kuti nekuwana kana kushandisa chero chikamu chewebsite ino yeChipikiri, unobvuma kusungwa neMitemo yedu yekushandisa yakarongwa pakarepo mushure meMitemo yekushandisa Summary. Kana iwe usinga bvumire kune ese mazwi uye mamiriro eZvirevo zvedu zvizere zvekushandisa, saka haungakwanise kuwana iyo sainzi yeSlumari webhusaiti kana kushandisa chero eve yedu masevhisi.
Stinzi inopa chikuva chekubatana pamwe nekukurukurirana pakati pevamiriri vemitemo ("Vashandisi Vashandisi") uye Vashandisi vari kutsvaga rubatsiro rwemitemo. ("Vatengi vemitemo"). Stumari haisi kambani yemutemo, gweta inotumira vanhu kana basa rekushandira, uye havavimbisa mibairo. Ndokumbirawo kuti ushandise Stikiri zvine mutsindo uye ndapota verenga zvakawanda nezvebasa redu muChikamu 2 pazasi.
Iwe unobatsira kuchengetedza kweakaunti yako, uye nezvese zviitiko zvinoitika pasi peakaundi yako. Ndokumbirawo kuti muverenge zvakawandisa nezve mabasa evashandisi muChikamu 3 pazasi.
Mamwe maitiro, akadai sekushandiswa kwesevhisi yebasa zvisiri pamutemo, haitenderwe paSisitiri. Ndokumbirawo kuti muverenge zvakawanda nezve maitiro emushandisi muChikamu 4 pazasi.
Zvimwe zvemukati, zvakadai sekutyisidzira zvikwangwani kana zvemukati zvinotyora kodzero dzechimwe chipati, hazvitenderwe paSipikiri. Stinzi ine mvumo yekubvisa iyo Mushandisi-Yakagadzirwa Zvemukati iyo inotyora isu mitezo. Ndokumbirawo kuti muverenge zvakawanda nezveMushandisi-Wakagadzirwa Zviri muChikamu 5 pazasi.
Mamwe mazwi akakosha anotonga Standisa raShauri Vashandisi. Semuyenzaniso:
Vashandisi Vanovabatsira havasi ivo vashandi kana vamiririri veSisitiri.
Hapana hukama hwemutemo-yemutengi inoumbwa naStumari, uye hapana basa rekuvanzika rakavapo, kuburikidza nekushandisa iyo Stumari Webhusaiti, kusanganisira kutumira mabasa.
Ukama hwemitemo-yemutengi inogona kuumbwa kuburikidza nekushandiswa kwevhisi pakati peMutemo Vatengi uye Vashandisi Vemubatsiri.
Vashandisi veMazano vane basa chete rekuona kuti chero ruzivo, kukumbira, kana kushambadza vavanotumira pawebhusaiti reStage kunoenderana nemitemo yese nemirairo yehunyanzvi hwemaitiro.
Stinzi haigadzi chero rudzi rwevimbiso maererano nekugona kwepamutemo, kugona, kana kunaka kweVashandisi Vashandisi vanogona kuve vakanyorwa pane yedu Webhusaiti.
Vashandisi veVanoona vakasununguka kugadzira uye kuchengetedza chimiro pane webhusaiti yaSarus. Nepo Stinzi ichiita zvekutengesa zvine hungwaru kuedza kusimbisa Mupi weVashandisi rezenisi yekuita mutemo, Stikiri haina inomiririra pamusoro peMubatsiri Wevashandisi womushure kana hunhu.
Anoshandiswa neanoongorora anogona kuve "Verified Consultant Mushandisi" nekupa Stumari imwezve simbiso yekuti iye anoshanda, gweta rine rezinesi uye mune zvakanaka kuita mutemo. Verified Consultant Vashandisi vanogona zvakare kubhadhara mubhadharo wekuwana kune yakawedzerwa Stinzi masevhisi uye ekushandisa maitiro ekushandisa. Stinzi haigumiri kana kurudzira Vashandisi Vashandisi uye ibasa reImutemo Mutengi kutora matanho ekupfuura usati wahaya Muongorori Mushandisi webasa repamutemo.
Iko hakuna mutengo kune Vatengi veMutemo kutumira chikumbiro chebasa paStumari kana kushandisa chero maturusi epamhepo eStumari kana magwaro. Iyo yekubatira kana yekugadzirisa muripo (semuenzaniso, kadhi rechikwereti) rinogona kushanda kumavoys akabhadharwa kuburikidza neStumari.
Ndokumbirawo kuti muverenge zvakawanda nezveVashandisi Vashandisi muChikamu 6 pazasi.
Stumari inoenderana neDhijitari Millenium Copyright Act yemahara yakachengetedzwa echiteshi. Kana iwe uchitenda kuti zvigadzirwa zvinowanikwa kana zvakabatana neStain zvinotyora copyright yako, unokurudzirwa kuzivisa Stumari zvinoenderana neStinin's Digital Millenium Copyright Act Policy. Ndokumbirawo kuti muverenge zvakawanda nezve Stumari's DMCA Policy mune Chikamu 8 pazasi.
Stinzi inogona kukutumira email seimwe yebasa rayo. Unogona kusarudza kubuda mune zvemagetsi kutaurirana. Ndokumbirawo kuti muverenge zvakati wandei nezvekutaurirana kwe email mune Chikamu 10 pazasi.
Stumari inogona kugadzirisa aya mazwi chero nguva. Nekudaro, Stumari ichakuzivisa iwe nezvekushanduka kwezvinhu kune iwo mazwi nekutumira chiziviso patsamba yayo yepamusha uye / kana kutumira email kune email kero yawakapa kuna Stikiri pamusoro pekunyoresa. Ndokumbirawo kuti muverenge zvakadzama nezvekushandurwa kwematemu aya ekushandiswa muChikamu 17 pazasi.
Ndokumbira kuti utarise Yakavanzika Yekuvanzika Kwemagariro kune rumwe ruzivo nezve kodzero dzevashandisi paStumari.
Ndokumbira kuti uone Mitemo izere kuti uwane rumwe ruzivo.
Tinokutendai nekusarudza Stumari sepamendi yeiyo yako yepamutemo ruzivo. Iyi inotevera Mashandisiro Ekushandisa anotonga kushandiswa kwese kweSevhisi kuburikidza neWebhusaiti inowanikwa pa https: //wtSt.tl.co.co nezvose zvirimo, masevhisi, uye zvigadzirwa zvinowanikwa kana kuburikidza neIsaiti. Isu tinonzwisisa kuti kuverenga Mamiriro Ekushandisa zvibvumirano ibasa asi tapota verenga chibvumirano ichi nokungwarira usati washandisa iyo Stumari Webhusaiti. Iyo inotaura nezvechimiro chebasa raSipikiri; iyo mitemo Stumari inotarisira kuti vashandisi vatevedze pane yedu Webhusaiti uye sevhisi yayo; hukama pakati peStumari, vashandisi vedu, uye vashandisi vedu vekupa mazano; uye izvo zviri pamutemo izvo zvinodzora iyi mitemo uye hukama. Nekuti chibvumirano chakakosha kudaro pakati pedu newe, vashandisi vedu, tamboedza kuzviita zvakajeka uye zvinosevenzesesa mushe sezvinobvira.
Nekuwana kana kushandisa chero chikamu che Webhusaiti, unobvuma kusungwa nemitemo uye mamiriro echibvumirano ichi. Kana iwe usinga bvumire kune ese mazwi uye mamiriro echibvumirano ichi, ipapo haungakwanisi kuenda kune Webhusaiti kana kushandisa chero chero mabasa edu. Iyo Webhusaiti inowanikwa chete kune vanhu vanopfuura makore gumi nemasere ezera.
Stumari Mirairo yekushandisa
Tsanangudzo. Aya anotevera mazwi anoshandiswa mune ese aya Mashandisiro Ekushandisa uye ane zvakadzama zvinoreva. Iwe unofanirwa kuziva zvinoreva rimwe nerimwe remashoko.
Izwi rekuti "Service" rinoreva masevhisi anopihwa naSipikiri, kusanganisira pasina muganho wekuwanika munharaunda yepamhepo yeStikira; zvishandiso zvekutaurirana; gwaro manejimendi uye zvigadziriso zvekuchengetedza; uye mabasa ekubhadhara. Stumari haipe gweta rinotumira basa kana kushanda sevashandi vebasa. Isu tinopa nzvimbo kune vedu Vashandisi kusangana uye kuchinjana ruzivo nevanoona nezveVashandisi vedu.
Izwi rekuti "Chibvumirano" (iro rinogona zvakare kuratidzwa pano seizvo "Mamiriro Ekushandisa") rinoreva, pamwe chete, kune ese mazwi, mamiriro, uye zviziviso zvirimo kana kuratidzwa mugwaro iri.
Iyo "Webhusaiti" inoreva webhusaiti yaSinzii iri pa https://www.Stumari.com, zvese zvidimbu uye zvidimbu, nezvose zvirimo, masevhisi, uye zvigadzirwa zviripo kana kuburikidza neWebhusaiti.
"Stumari," "Isu," uye "Isu" zvinoreva Stumari, Inc., pamwe chete nevatinowirirana navo, vatungamiriri, masangano, maofficial, nevashandi. Vashandisi Vanovabatsira haisi chikamu cheSisitiri.
“Mushandisi,” “Iwe” uye “Wako” zvinoreva munhu, kambani, kana sangano rakashanyira kana kushandisa Webhusaiti uye / kana Sevhisi. Mushandisi anogona kunge ari Mutemo weMutengi, Anopa Anogona Anoshandisa mose, kana kana kwete.
"Vashandisi Vashandisi" vanoreva kune vakanyoreswa vekuvheneka vanoshandisa mubazi rezvemitemo vanogona kutaurirana nekupa chibvumirano kana basa rekuona kune veMutemo Vatengi kana vavanoshanda navo Consultant Vanoshandisa neSevhisi. Vashandisi Vanovabatsira havasi ivo vashandi kana vamiririri veSisitiri. Ndokumbira kuti uone Chikamu 6 cheiyi Chibvumirano kuti uwane rumwe ruzivo pamusoro peVashandisi Vashandisi
"Vatengi veMutemo" zvinoreva iyo 1) Vashandisi vanopa zvikumbiro kubva kune Vakuru veMashandisi ekupa mabasa epamutemo mubhadharo ("Mabasa"); uye 2) Vashandisi vanoita chibvumirano neVanoona nezveVashandisi vebasa rakawedzerwa, iro, nekuda kwezvikamu zvechinomwe pazasi, rinogona kusanganisira basa risingaperi, kupfuura iro rekutanga Job iro rakasimbisa iye Anobvunzana User -Mutemo Mutengi hukama. Vashandisi Vanoona Vanogona kuendesa zvirevo (“maBids”) emaBasa akadaro uye vanogona kumisawo hukama hwehukama neyeMutemo Mutengi kuburikidza netsamba yakasainwa yekubatana kana chimwe chibvumirano chakanyorwa. Ndokumbira kuti uone Chikamu 7 (b) kuti uwane rumwe ruzivo nezveMabasa, Bhiri, uye Vatengi vemitemo
"Zvemukati" zvinoreva zvemukati zvinoratidzwa kana kuratidzwa kuburikidza neWebhusaiti, kusanganisira pasina muganho mameseji, magwaro, ruzivo, datha, zvinyorwa, maonero, mifananidzo, mifananidzo, mifananidzo, software, mashandiro, vhidhiyo rekodhi, makaseti odhiyo, ruzha, zvigadzirwa, maitiro, nezvimwe zvinhu zvinowanikwa paWebhusaiti. Zvemukati zvinosanganisira, pasina kumuganhurira, Mushandisi-Wakagadziriswa Zvemukati, izvo zvinogona kuendeswa nechero mushandisi weStavy (Mutemo Wezvemitemo kana Wemubatsiri weVashandisi).
Pamusoro peSevhisi Service.
Iyo Stumari Service ipuratifomu yekudyidzana uye kutaurirana pakati pevashandi vepamutemo nevari kutsvaga rubatsiro pamutemo. Iyo Stumari Service inopa mukana wekuwana weStatula's chaiyo nharaunda yeyanzvi hweAcustomer Users; kubatana kuri nyore kuburikidza neetwork's management management management gwaro kutonga uye kuchengetedza; uye yakapusa, yakachengeteka yekubhadhara uye invoicing zvishandiso.
Stinzi Haisi Mutemo Wakasimba. Stinzi haipe humbowo hwepamutemo. Stinzi haapi chero zano repamutemo, mazano emutemo, kurudziro, kutumirwa, kana kupa zano. Vashandisi Vanovabatsira havasi ivo vashandi kana vamiririri veSisitiri. Stinzi haina chekuita nezvibvumirano pakati peVashandisi kana mumiririri weVashandisi. Panguva ipi neipi apo Stumari inogona kuve nemhosva yezviito kana kusiyiwa kweAchero maApi Anoshandisa Chibvumirano chako chinoita mabasa ekuvabvunza.
Stinzi Haisi Gweta Rejendekushandira Service kana Yekushandisa Basa. Stumari haisi gweta rinotumira basa kana mushandi basa. Stinzi haisarudze kana kubvumidza chero munhu upi zvake Anopa Anobvunza Mushandi kuti ashumire Mutemo weVatengi. Nepo Stumari ichishandisa kutengeserana zvine hungwaru kuedza kusimbisa kuti Vakanyoresa Vashandisi Vashandisi vane marezinesi magweta, isu hatiite chero waranti, garandi, kana kumiririra sekugona kwepamutemo kugona, kugona, mhando, kana hunhu hweMubatsiri weAvashandisi. Stinzi haina waranti kana kuvimbisa kuti Vashandisi Vashandisi vanovharwa neinishuwarenzi dhiri reinishuwarenzi. Stumari inokurudzira Vatengi vemitemo kuti vatsvage chero Webvunzi Anoshandisa usati wagamuchira zano reunyanzvi.
Stumari haina kupokana kune chero yeVashandisi vayo. Stumari inongopa ipuratifomu iyo vanotsvaga pamutemo vangataurirana uye kuita basa nenyanzvi dzezvemitemo. Stumari haimiriri chero yeVashandisi Vayo vashandisi uye hairatidze zvirevo zvinoitwa neVabatsiri Users pachikuva. Stumari haigone kumiririra maererano nezvinofanirwa nevanhu vasiri magweta pamutemo vanopa vashandi.
Stinzi Haisi Yokusimbisa Mhedzisiro. Nguva nenguva, Vatengi vemitemo vanogona kuendesa kuongororwa kweVashandisi Vashandisi; wongororo idzi hadzivimbisi garandi, waranti, kana kufanotaura nezve mhedzisiro yezvemitemo yemangwana. Stinzi haichazovi nebasa kana mhosva yemhando ipi neipi kune chero Mushandisi-Anogadzirwa Nenyaya kana zano repamutemo iwe raunosangana naro kana kuburikidza neIsaiti, uye chero kushandiswa kana kuvimba neMushandisi-Kugadzirwa Kwemukati kana zano repamutemo zviri panjodzi yako wega.
Kushandiswa kweSipikiri hakugadziri Gweta-Mutengi Ukama ne Stikiri. Stinzi haapi zano repamutemo kana mabasa. Chero kushandiswa kweStage Chipo Service hakuitirwe, uye hakuzi, kugadzira hukama hwemutemo-wevatengi. Chero kutaurirana kuburikidza neStinzi inogona kunge isingaitirwe chakavanzika. Stinzi haina mhosva kune zviito kana kusiyiwa kweyipi neipi Consultant User inoita basa rekubvunza iwe.
Mabasa Ekushandisa. Iwe, uye iwe wega, ndiwe unozvidavirira kuakaunti yako uye chero zvinoitika iwe uchinge uchinge uchinyorerana mukati mako kana kushandisa account yako. Kuchengetedza kwako ibasa rako.
Security Account yeMushandisi. Kana iwe ukaina kusaina kweSevhisi, uchagadzira iyo accounted account iyo inosanganisira yakasarudzika zita rezita uye password yekuwana iyo Service uye kugashira mameseji kubva kuStage. Iwe unozvidavirira kuchengetedza chengetedzo yeakaunti yako, uye iwe unozvidira zvizere nezve zviitiko zvese zvinoitika pasi peakaunti uye chero zviito zvakatorwa zvine chekuita neakaunti. Iwe unobvuma kuzivisa Stumari nekukurumidza nezvese kushandiswa zvisiri pamutemo kweakaunti, kana chero humwe hutongi hwekuchengetedza. Hatizovi nemhosva yezvikwereti, kurasikirwa, kana kukuvara kunobuda nekushandisa zvisiri pamutemo komputa yako, nharembozha, kana chimwewo chinhu chemakomputa uye / kana account. '
Ukama neVashandisi Vashandisi. Nekuti isu hatigone kuvimbisa kusimba kwemumwe wevashandisi Vedu veVanoona nezvezvido zvako, tinokurudzira Vatengi veMutemo kuti vatsvage chero Mupi weVashandisi asati agamuchira zano reunyanzvi. Vatengi veMutemo vanogona kukumbira zvakare kunyoreswa kwemutemo chibvumirano chekutaura chinongedzera mazwi, chiyero, zvisingakwanisi, uye mamiriro emumiriri.
Hapana Kuvimbika pane Mushandisi-Kugadzirwa Kwemukati. Mushandisi-Anogadzirwa Nezvinhu zvakatumirwa paWebhusaiti, senge mabloggi, zvinopihwa kuitira ruzivo chete, pasina vimbiso yekuti Mushandisi-Anogadzira Zvinyorwa ndezvechokwadi, zvakarurama, kana kuti ndizvo Mushandisi-Wakagadzirwa Zvemukati hazvisi kutsiva kune nyanzvi dzezvemitemo mazano kana kukumbira kupa zano repamutemo maererano nezvimwe chokwadi. Haufanire kunonoka kana kumberi kutsvaga zano repamutemo kana kusaremekedza nyanzvi yezvemitemo yezvemitemo yakavakirwa pane Mushandisi-Anogadzirwa Nezvinhu. Kunonoka pakutsvaga zano repamutemo rakadai kunogona kukonzera kunzvengwa kwechero zvaunenge waudzwa, zvichienderana nechero (mutemo) unoshanda. Mushandisi-Wakagadzirwa Zvemukati hazvigadziriswe nechero nyika kana yenyika bar masangano
Kuteerana neMirairo. Iwe unomiririra uye waranti kuti: (i) une mvumo yeku, uye vezera repamutemo mudare rako kuti, uzvisunge muchibvumirano ichi; (ii) kushandisa kwako Sevhisi kunongoitirwa chete zvinangwa zvinobvumidzwa nechibvumirano ichi; (iii) kushandisa kwako Sevhisi hakuzokanganise kana kushandisa zvisiri izvo kodzero dzezvivakwa zvemunhu wese wechitatu; uye (iv) kushandisa kwako seSevhisi kunoenderana nemitemo yese yemuno, yenyika uye yemubatanidzwa, nemitemo, uye nemirairo, uye nezvimwe zvese zvinongedzo zveStage.
Shandisa uye Kuita Zvinodzora. Unotenderwa kushandisa basa racho chero uchitevedzera mashoma mitemo. Izvi zvinotevera Shandisa Zvinodzora uye Mufambiro Zvinodzora ndizvo zvakakosha mitemo yatinotarisira kuti vashandisi vatevedzere pavanenge vachishandisa Service. Isu hatisi mhaka yezvinyorwa izvo vashandisi vedu vanotumira, uye isu tine kodzero yekuvhara maakaunti kana tichida.
Zvakadziviswa Zvakawanda. Iwe unobvuma kuti hauzopfuure chero mamiriro ezvinhu (kusanganisira software, zvinyorwa, mifananidzo, kana rumwe ruzivo) izvo
zvisiri pamutemo kana kusimudzira zviitwa zvisiri pamutemo
inoremadza, kushusha, kushungurudza, kutyisidzira, kana kukonzera mhirizhonga kune chero munhu kana boka
iii. zvinonyadzisira, rusarura, kana zvimwe zvinokuvadza kana kutyisidzira munhu kana boka pamusoro pechinamato, murume kana mukadzi, zvido zvevepabonde, dzinza, dzinza, zera, kana kuremara.
spam, iri muchina- kana kuti nasisi-yakagadzirwa, inoita kushambadzira kana kusingabvumirwe, kushambadzira mavara, chero humwe rudzi rwekukumbira kusingafungidzirwe, kana chero fomu ye lottery kana kubhejera;
ine kana kuisa chero hutachiona, honye, ​​malware, Trojan mabhiza, kana chimwe chinhu chakagadzirwa kana kuti chakavhiringidza, kukuvadza, kana kudzikamisa kushanda kwe chero software, zvigadzirwa zvemitambo, kana zvekufonera michina kana kukanganisa kana kuwana kusatenderwa kuwana chero data kana rumwe ruzivo rwechero chitatu;
kutyora kodzero yekuremekedza chero yebato, kusanganisira patent, trademark, sirivha yekutengesa, copyright, kodzero yeveruzhinji, kana dzimwe kodzero
vii. anoteedzera chero munhu kana sangano, kusanganisira chero wevashandi vedu kana vamiririri; kana
viii. kutyora kuvanzika kwemunhu wechitatu.
Vashandisi Vanofanirwa Kuva Vanopfuura Zera 18. Iwe unomiririra kuti iwe unopfuura zera ramakore gumi neshanu. Sitiraki haina kunanga Zvedu zviripo kuvana kana vechidiki vari pasi pegumi nemasere, uye hatitenderi chero Vashandisi vari pasi pegumi nesere paSevhisi yedu. Kana tikadzidza nezveMushandisi chero ari pasi pemakore gumi nemasere, tinomisa iyo account yeMusengi nekukurumidza.
Hapana Chikwereti cheMushandisi Wekuita; Stinzi Mai Monitor Kukurukurirana. Chero ipi mhosva, kurasikirwa kana kukuvara kunoitika semhedzisiro yehukama hweMushandisi, kusanganisira, pasina muganho, Job Postings, iwe yaunopinza kana kugamuchira kuburikidza nekushandisa kwako kweSevhisi iripo chete mutoro wako. Nekuda kwedu, isu, kana tekinoroji yatinoshandira, tinogona kutarisa uye / kana kureketa kuwirirana kwako neChipo, asi zvisiri zvekufungidzira kwekudyidzana kwako pamutemo.
Kurudyi Kupedza Maakaunti. Tine kodzero (kunyangwe isiri musungo) yeku, mukufunga kwedu chete, yekuona kana kwete chero maitiro eMushandisi akakodzera uye anoenderana neMitemo iyi yekushandisa, kana kumisa kana kuramba kupinda uye kushandiswa kweSevhisi kune chero Mushandisi kune chero chikonzero, kana kana usati waona chiziviso.
Mushandisi-Wakagadzirwa Zvemukati. Iwe ndiwe zvako zvemukati, asi unotibvumidza mvumo, kuti tigone kuratidza nekugovana zvemukati zvaunotumira. Tine kodzero yekubvisa zvirimo kana tichida.
Kuzvidavirira kweMushandisi-Kwakagadzirwa Zvinyorwa. Iwe unogona kugadzira zvirimo, zvakanyorwa kana neimwewo nzira, uchishandisa iyo Service ("Mushandisi-Wakagadzirwa Nenyaya"). Iwe unongotarisira zvemukati zve, uye chero kukuvara kunokonzerwa, chero Mushandisi-Wakagadzirwa Zvemukati zvaunotumira, kurodha, batanidza kune kana zvimwe kuita kuti uwanikwe kuburikidza neSevhisi, zvisinei nemhando yechinhu icho. Chero mhosva, kurasikirwa kana kukuvara kunoitika nekuda kwekushandiswa kwese kweMushandisi-Kugadzirwa Kwemukati kwaunoita kuti kuwanikwe kana kuwana kuburikidza nekushandisa kwako kweSevhisi iripo chete mutoro wako. Isu hatisi mhaka kune chero yeruzhinji kuratidzwa kana kushandiswa zvisizvo kweMushandisi Wako-Kugadzirwa Kwemukati.
Kurudyi Kutumira. Iwe unomiririra uye waranti yekuti une kodzero yekutumira zvese Zvemashandisi-Akagadzirwa Zvese zvaunotumira. Kunyanya, iwe unosimbisa kuti wateedzera zvizere nechero rechitatu rezinesi zvine chekuita neMushandisi-Kugadzirwa Kwemukati, uye watora matanho ese anodikanwa kuti apfuure kuti upedze vashandisi chero mazwi anodiwa.
Stinzi Mai Gadzirisa kana Bvisa Zviri mukati. Tine kodzero (kunyangwe isiri musungo) yekuti, mukufunga kwedu pachedu, sarudza kuti kana kwete chero Mushandisi-Anogadzirwa Zvemukati akakodzera uye anoenderana neMitemo iyi yekushandisa, kana kuramba kana kubvisa chero Mushandisi-Wakagutswa Zvemukati izvo, mumaonero edu ane musoro , anotyora chero mutemo weStumari kana munzira ipi neipi inokuvadza, isina kunaka, kana kuti isingafungidzirwi. Stinzi inoramba ichichengetera kodzero yekugadzira uye kurongedza uye nekuchinja maitiro chero Mushandisi-Wakagadzirwa Zviri mukati unoratidzwa pane Webhusaiti.
Muridzi weMushandisi-Anogadzirwa Nenyaya. Kunze kweZvemukati zvinobva kuStumari, isu hatiti muridzi wechero Chero chinhu chinotapudzwa, chakachengetwa, kana chakagadziriswa muakaunti yako. Unochengetedza zvese zvevaridzi, kutonga uye, uye mutoro weMushandisi-Yakagadzirwa Zvese zvaunotumira. Iwe unogona kudzora kupinda kune yako Mushandisi-Yakagadzirwa Kwemukati kuburikidza nesystem mu yako mushandisi account.
License Grant. Solely kubvumira Stumari kuti ishandise Chinyorwa chaunorodha kuSevhisi zvine chikonzero usingatyore chero kodzero dzauinazvo mairi, munotipa kodzero dzinotevera: nekutumira chero zvipi zvinhu kuburikidza neWebhusaiti, munopa pachena Stikiri nevatinotandanisa navo pasirese, isinganetsi, zvizere -akabhadharwa uye nehumambo-isina, uye isina-yakasununguka rezinesi yekushandisa, kubereka, kuratidza, shandura, shandura, kugovera, uye kuita Zviri mukati zvine chekuita nebhizinesi raStumari. Izvi rezenisi hazvipe Stumari kodzero yekutengesa Mushandisi-Wakagadzirwa Zviri mukati kana neimwe nzira unozvigovera kunze kweWebhusaiti yedu. Iyi rezinesi ichagumisa panguva iyo zviri mukati zvabviswa paWebhusaiti.
Kubvunza Vanoshandisa. Vashandisi Vanovabatsira inyanzvi dzezvemitemo dzakazvimirira dzinopa kuita mabasa ekubvunza kune avo vangangoita veMutemo Vatengi. Havasi vashandi veStage.
Hapana Gweta-Mutengi Ukama kuburikidza neInternet Use. Kushandisa kweiyo Stinzi Webhusaiti inogona kunge isingaumbe iyo yemugweta-mutengi hukama neAelvis Users. Ruzivo rwunotumirwa kana kuita kuti ruvepo pairi kana kuburikidza neWebhusaiti, kusanganisira, pasina muganho, chero mhinduro kumibvunzo yepamutemo yakatumirwa paWebhusaiti; ruzivo muStumari's Guides uye Zvinyorwa; ruzivo rwakatumirwa pachena paWebhusaiti; kana ruzivo rwakatumirwa mushoko risingafungirwe kuMushandisi harina kuitirwa sezano repamutemo, harisi kuvanzika, uye harigadzike hukama hwemutemo-wevatengi. Iyo inoonekwa seMushandisi-Inogadzirwa Nezvemukati.
Gweta-Vatengi Ukama kuburikidza neKushandisa Service. Iyo yemutemo-mutengi hukama inogona kuumbwa kuburikidza nekushandiswa kweSevhisi pakati peVashandisi uye Vakuru veVashandisi chete. Vatengi vemitemo vanogona kutumira Mabasa kuburikidza neSevhisi. Vashandisi Vanoona vanogona kuendesa maBids uye kutaurirana zvinhu zveMabasa aya usati wagamuchirwa. Paanobvumwa, chiyero cheMiriri weMushandisi chinomiririra chakanyatsoomarara pane chinhu chakabvumiranwa muBhiri kunze kwekunge Mutengi neMutevedzeri WeMutemo akazotevera kuronga kurongeka kwavo kuburikidza netsamba yakanyorwa yakanyoreswa kana chimwe chibvumirano chakanyorwa, mukati mayo chibvumirano chakanyanya kunyorwa chaizonyorwa. tungamira pamusoro pechikumbiro chakambogamuchirwa. Bhiri haisi yekutsiva iyo-munhu kana kutaurirana parunhare negweta rakapihwa mvumo yekuita muchiitiko chako nezvenyaya yako yepamutemo, uye haufanirwe kuvimba neruzivo rwuri muBid sezano repamutemo. Stumari inotora kuedza kwakawanda kuita kuti kuve nekuvanzika kweBids uye mamwe maextelli eSevhisi yedu, asi haigone kuvimbisa kuvanzika. Nhaurirano inoda kuvanzika inofanirwa kuitika kunze kweSisitiri Service, sekufonera.
Mabasa Ekushandisa. Vashandisi veMazano vane basa chete rekuona kuti chero ruzivo, kukumbira, kana kushambadza kwavanotumira kana kuisa paWebhusaiti, kusanganisira pasina muganho weVashandisi-Vakapihwa Vemukati, uye chero kutaudzana kwavanogona kuve nevanozotarisira vatengi kuburikidza neWebhusaiti kana seSevhisi, vanoenderana zvizere mitemo yese inoshanda nemirairo yehunyanzvi hwekuita, kusanganisira izvo zvine chekuita nemutemo usingabvumirwe uye iwo anotonga mafomu, maitiro kana zvirimo zvekutaurirana nevatengi, kushambadza, kana zvimwe zvinhu.
Kubhadhara kweVashandisi Vashandisi. Mamwe mazwi akanangana anotonga Vanoshandisa Vashandisi uye kubhadhara.
Stinzi Haisi Bato Kuzvibvumirano. Vatengi vemitemo vanogona kuita chibvumirano neVanoona nezveVashandisi kuburikidza nekutumira uye kugamuchira Mabasa. Izvo zvibvumirano zvakadaro zviri chete pakati peMutemo Mutengi uye Anopa Anoshandisa. Stinzi haizove bato kune chero zvibvumirano zveJobs zvakaunzwa kuburikidza neSevhisi yedu, kunze kwekutumirwa nemukuru weStumari. Stinzi inofambisa zvibvumirano izvi nekupa chikuva chekutungamira manejimendi nematurusi ekubhadhara.
Mari Yese Yemutemo Inobhadharwa Kubvunza Vashandisi. Stinzi haapi mabasa epamutemo uye haabhadharire mabasa emutemo. Mari dzinobhadharwa dzinoitirwa Vashandisi veVashandisi kuburikidza neyeStalas's bank yekubhadhara inoendeswa zvakananga kune Yekubhadhara Mubatsiri account's account, zvishoma chero zvipi zvinosangana nebasa uye nekubhadhara mari (semuenzaniso, kiredhiti kadhi
iii. Vashandisi Vanoona Vanozo Gamuchira Yekubhadhara Kuburikidza NeSevhisi Yese Yekushandisa. Vabatsiri veVashandisi vanogamuchira Mabasa kuburikidza neSevhisi vanozogamuchira mubhadharo kuburikidza nehumiro yezvinhu zvese zvinoenderana nemushandisi uyo, zvinosanganisira zvinotevera zvinoteedzera zvisingaenderane neyekutanga Jobho. Kana Mutengi wemitemo ari asingade kana kutadza kubhadhara kuburikidza neStumari, Mushandisi weAnobvumirana anobvuma kuzivisa Stumari nezve chero chirongwa chitsva chekubhadhara. Kubhadharwa neMutemo Mutengi kuMubatsiri weMushandisi, akaitwa kunze kwebasa pasina kumberi kuzivisa kuna Stikiri, anogadzira kuzadza kwakazara neveviri mapato eStumari's yekubhadhara garandi / kuchengetedzwa kwekukakavadzana sezvakakurukurwa muZvikamu 14 ne15 pazasi, kunyangwe iwo angangodaro ane chekuita nezve kubhadhara kunoitwa mukati mebasa.
Makodhi Ekusimudzira uye Credits. Stinzi inogona, mukufunga kwayo kwayo, kugadzira makodhi okusimudzira ayo anogona kuregererwa nekuda kwechikwereti cheaccount, kana zvimwewo zvinhu kana mabhenefiti ane hukama neSevhisi Yevashandisi masevhisi, zvichiteerana nematanho anotevera uye chero mazwi ekuwedzera anogadzwa neStumari pane yega yekusimudzira kodhi "Promo Codes"). Mamwe mazwi akanangana anotonga Vanoshandisa Vashandisi uye kubhadhara.
Kushandisa kwePromo Cods Hazvireve Muti-Wehukama hwehukama. Nguva nenguva, Vatengi veMutemo vanogona kuve nekuwana kune izvo zvadzinopi zvinopihwa naSipikiri izvo, muchikamu, zvinoshandisa mari yeStumari kubhadhara chikamu chemari inobhadharwa neMutemo Vatengi kune Vashandisi Vemutemo. Iko kushandiswa kwemakoni aya hakureve chero hukama negweta-mutengi pakati peSipinisi neVashandisi Vashandisi uko coupon inoshandiswa kune chero kubhadharisa kwakabhadharwa kunobva kuMutemo Mutengi.
MaPromo Makodhi anofanirwa kushandiswa nevanovimbisa vavateereri, pachinangwa chavo, uye nenzira yepamutemo.
Nhamba dzepromo dzinogona kunge dzisingadzokororwe, kutengeswa kana kuendeswa neimwe nzira, kana kuwanikwa kune vanhuwo zvavo (ingava yakatumirwa kuruzhinji rwevanhu kana neimwewo nzira), kunze kwekunge zvichinyatso bvumidzwa naStumari. Promo Codes haina mari inokosheswa uye inogona kupera kana kuremadzwa neChipikiri chero nguva, chero chikonzero, usati washandisa. Stumari inochengetera kodzero yekubvisa kana kubvisa zvikwereti kana zvimwewo zvinhu kana kubatsirwa kunowanikwa kuburikidza nekushandiswa kwePromo Codes newe kana chero mumwe mushandisi muchiitiko icho Stikiri inotarisisa kana kutenda kuti kushandisa kana kudzikunura kwePromo Code kwaive kukanganisa, hunyengeri, zvisiri pamutemo, kana kutyora ayo anoshanda Promo Code mazwi.
Mushandisi Offers yeBasa kune Vakawanda Vanoshandisa.
7.1 Mubayiro Wekubudirira Kwebasa. Muchiitiko icho Mupi WeMubvumirano anogamuchira kupihwa basa ("Yakavharwa Basa") yakaitwa neMushandisi (rimwe nerimwe, "Mushandirwi Mushandisi"), kungave kwenguva isingagumi kana yakatarwa, panguva kana mukati memakumi gumi nemasere (18) mwedzi (nguva yakadaro, iyo "Yakavharwa Yakapiwa Nguva") mushure mekunge iye Anobvunza Mushandisi atanga iyo yekutanga Jobho yeiyo Mushandisi (yega yega, "Yakavharwa Yakapiwa"), anotevera mazwi nemamiriro anoshanda:
Mumwe nemumwe Anoshandisa Mushambadzi anobvuma kuti (1) kana ukagamuchira Chifukidzo Chakabviswa, iwe unofanirwa kuzotaurira Stikiri nezvezuva rako rekutanga kweKubasa Kwakavanzika (iyo "Nguva yekutanga") uye mazwi akakosha eakafukidzwa Yemubhadharo (uye zivisa Stikiri nekukasira kunyora anofanira kuti Kutanga Zuva kana kupa mazwi shanduko chero nguva), (2) iwe unopa Stikiri ne (a) kopi yeakaurawa wakakwana Wakavhara Kunzverwa, kana (b) ita gwaro pakati pako, Mushandirwi Mushandirwi uye Stumari rinotaura zvinhu mazwi ebasa, kusanganisira, pakati pezvimwe zvinhu, Kutanga Zuva uye muripo, nekukurumidza kusaina kweakafukidzwa Basa rekutumira tsamba pakati pako neMushandisi Mushandisi (iyo "Kubudirira Zuva"), sezvakakumbirwa mukunyora naStumari, uye (3) iwe anokurumidza kuzivisa Stumari nekunyora mushure mekupedza basa rako sewe mushandi muchiitiko icho (a) Mushandirwi Mushandirwi anorega Basa Rako rakavharwa zvichibva mukusagutsikana kuita mukati memakumi mapfumbamwe (90) ezuva iro iro Basa Rako rakavharwa. watanga, kana (b) iwe unomira basa rako nokuzvidira mukati memazuva makumi mapfumbamwe (90) kubva pazuva rakatanga basa rako. Muchiitiko chekuti Zuva Rokutanga risati ratanga, iwe kana iye mushandirwi Mushandirwi akasarudza kuti usatange hukama hwebasa rinofungidzirwa neChipo Cakavharwa, unofanira kukurumidza kuzivisa Stikiri nekunyora.
Kune Vashandisi Vashandisi.
Kana Munyaradzi Mushandisi agamuchira Yako Yakavharwa Inopihwa, unobvuma kubhadhara mari inobudirira kuna Stikiri (yega yega, iyo "Kubhadhara Mari") yakaenzana nehafu inotevera pesenti yeMubatsiri User's base muhoro wakadzika muCover Offer (iyo Mubatsiri Wevashandisi "Base Mari '”, iyo mari ichave yakakodzera uye ichabhadharwa pasati papera mazuva makumi matatu (30) mushure meKutanga Zuva uye neimwe nzira zvichiteerana nerevo yekutanga yega yeChikamu 13.b. uye Chikamu 13.d. izvi:
Kana Kutanga Zuva kunoitika pane kana isati yasvika nhamba yemazuva mushure mekutanga kweiye Mushandisi Mushandisi-Mushandisi Anopa basa Base Base Mari Yemari
1-182 mazuva 15%
183-365 mazuva 10%
366-550 mazuva 5%
Days 551 mazuva 0%
Nekugamuchira aya Mashandisiro Ekushandira, Mushandisi Mushandisi anobvuma kuti Stumari inotenderwa kuti invoice Mushandi Mushandisi account yekubudirira kwese Kubhadhara kunobhadharwa uye kunobhadharwa kuna Stumari pano uye kuti hapana chimwe chiziviso kana mvumo inodiwa.
7.2 Kubudirira Kwemubhadharo Mari.
Pasinei nezvakafanotariswa, mune musangano weBudiriro YeMubhadharo, kana Mushandirwi Mushandisi anogona kugonesa kuti Mushandisi Mushandisi aive neActivation process (sekutsanangurwa pazasi) neMubvunziridzi Mushandisi usati washandisa Stumari's Webhusaiti uye / kana Sevhizheni (semuenzaniso, iye Anobvunza Mushandisi akange atotanga chirongwa chekubvunzurudza neMushandisi Mushandisi uye maitiro akadaro akange asina kugumiswa, kana Mushandisi Mushandirapamwe aive atora reruzivo rweMushandisi kubva kubazi rezvevashandi kana musorohunter uye anga achitariswa neMushandirwi Mushandisi). kusunungurwa pakubhadhara Mari Yekubudirira. Zvisinei, kufunga kwekupedzisira kwekuti Mubairo Wobudirira wakweretwa neMushandisi Mushandisi weakagovaniswa Unopihwa uchave uri parutivi rweSikiri. Nezvinangwa zvazvino, "Active process" ichareva kuenderera mberi kutaurirana, kusangana, mune yekurairidza basa kana yekuhaya mamiriro apo sarudzo yekuisa mukwikwidzi akabata kana kuramba isina kuitwa, mukati mematatu matatu (3) mwedzi usati washandisa. iyo Webhusaiti uye / kana maSevhisi eMubatsiri Anoshandisa uyo anowanikwa mune yeVashandirwi Mushandisi yekutsvaga nzira yekutevera kana iyo yakaendeswa nehofisi yekunyorera.
KANA URI MUDZIMAI USERERESI ari kushandisa yedu Webhusaiti uye / kana Service, UNOTENDA kune aya mabudiriro Mutero WeMari. Kana usiri kubvumirana neizvi chero zvinhu izvi, ndokumbirawo uise account yako nekukasira kurega kushandisa Webhusaiti Yedu uye masevhisi YAKO KUTI UVHURE URI KUTI UVHADZE CHOKWESE ZVINOGONESA ZVINOGONA KUSHANDISA Chero chii zvacho KUSHANDISA TERMS YOKUSHANDISA. Kana Mushandirwi Mushandisi akatenderedza yedu saiti uye / kana Services mushure mekuwana Muvhenganisi Mushandisi kuburikidza neNzvimbo yedu uye / kana Services uye anotevera kubatira iye Anozivisa Mushandisi, Mushandirwi Mushandirwi achapihwa mubairo wekubudirira wakaenzana ne25% ye Base Base Mari yeMubvunzi. Mushandisi uye Stikiri inogona, mukufunga kwayo kwayo, kugumisa iyo Mushandisi Yevashandisi Stirasi account.
7.3 Kudzorera mari.
Kana (a) Mushandirwi Mushandirwi achipa Mushandisi WeMushandisi basa uye achigumisa basa reMushandisi wePfungwa zvichikonzerwa nekusagutsikana kuita mukati memakumi mapfumbamwe (90) mazuva Ekutanga Zuva, (b) Mushandisi Anoshandisa anorega basa rake mukati memazuva makumi mapfumbamwe (90) yeZuva Rokutanga, kana (c) Mushandisi Wekushandisa haatangi basa nekuti pamwe Mushandisi Mushandisi kana Mushandisi weZano anosarudza kusatangisa hukama hwebasa rinotsanangurwa muMupiro Wakavharwa (imwe neimwe, “Chiitiko Chemhedziso”), pane runyorwa rwakanyorwa uye kusimbiswa. yeruzivo rwakadaro, Stumari ichadzosera zvizere kuMushandisi Mushandisi Mari Yebudiriro inoenderana nekumisa Mushandisi WeMubatsiri.
Chechitatu Party Zvemukati. Panogona kunge paine zvemukati kubva kune wechitatu mapato pane webhusaiti yaSarus, senge mabloggi akanyorwa nevamwe vashandisi kana kubatanidza kune mamwe mawebhusayithi. Nekuti hatikwanisi kudzora izvo zvemukati, isu hatisi mhaka yeiyo zvirimo kana kuti mawebhusaiti ayo anogona zvemukati anogona kubatana nazvo.
Kuwanika Kwetatu Party Zvemukati. Nekushandisa Service, iwe uchagona kuwana Zvemukati zve kana zvinobva kune wechitatu mapato ("Wechitatu Party Zvita"). Kushandisa kwako kweSevhisi kubvumidza kuti Stinzi ipe izvi izvi kwauri. Unobvuma mhosva yese, uye uchifungidzira zvese njodzi, kushandisa kwako weChitatu Party Zvemukati.
Hapana Mutoro weChitatu chePati Zvemukati. Sechikamu cheBasa, Stinzi inogona kukupa iwe zvinongedzo zvakanakira kune wechitatu webhusaiti webhusaiti (s) pamwe nemamwe mafomu eChitatu cheMukati Zvemukati. Izvi zvinongedzo zvinopihwa sechipo kune Vanyoreri vekunyoresa. Isu hatina wekutonga pamusoro pewechitatu webhusaiti kana zviri mukati kana kukurudzira, zvinhu, ruzivo, zvinhu kana masevhisi anowanikwa padziri. Nekubatanidza kune zvakadaro, hatimiriri kana kureva kuti tinotora kana kubvuma, uye hatisi mhaka yeiwo, iko kukosora kana kuvimbika kwemaonero, zano, kana chirevo chakaitwa nemapoka kunze kweStage. Isu hatisi mhaka kune chero Chetatu Party Zvemukati zvinowanikwa kuburikidza newebsite yedu. Kana iwe ukafunga kusiya Webhusaiti uye kuwana yechitatu Party Yekutanga, iwe unozviita panjodzi yako uye unofanirwa kuziva kuti mutemo wedu uye mitemo haichatongi. Iwe unofanirwa kuongorora mazwi anoshanda uye mutemo, kusanganisira kuvanzika uye maitiro ekuunganidza data, zvezvinhu zvakadaro.
Hapana Mvumo yekushandisa Chetatu Party Zvemukati. Chibvumirano ichi hachikupi mvumo yekuparadzira, kuratidza pachena, kuita pachena, kuitisa kuwanikwa, kushandurwa, kana zvimwe kushandisa chero chinhu chetatu Chechitatu kunze kwekungobvumidzwa nemirau nemamiriro eStumari.
Copyright Infringement neDMCA Policy. Kana iwe uchitenda kuti zvinhu zvinowanikwa kana zvakabatana neStain zvinotyora copyright yako, ndapota zivisa Stikiri maererano neDigital Millenium Copyright Act yedu.
Kubviswa kwe Kudzokorora Infringer Akaunti. Stumari inoremekedza kodzero dzepfuma dzevamwe uye kukumbira kuti Vashandisi vedu vaite zvimwe chete. Kutungamira ku 17 USC 512 (i) yeUnited States Copyright Act, isu tinomisa Mushandisi kuwana uye kushandisa iyo Webhusaiti kana, mumamiriro ezvinhu akakodzera, mushandisi akatsunga kuve anodzokorora kuputsa kweanopira kodzero kana imwe kodzero yeuchenjeri kodzero. of Stumari kana vamwe. Tinogona kumisa kuwanikwa kwevatori vechikamu kana vashandisi vanowanikwa vachiramba kupa kana kutumira zvakachengetedzwa chetatu zvemukati pasina kodzero dzinodiwa uye mvumo.
DMCA Tora-Pasi Zviziviso. Kana iwe uri muridzi we copyright kana mumiririri we muridzi we copyright uye uchitenda, nokutenda kwakanaka, kuti chero zvigadzirwa zvakapihwa paSevhisi zvinopwanya kodzero dzako, iwe unokwanisa kuendesa chiziviso zvinoenderana neDhijitari Millenium Copyright Act (ona 17 USC 512) ("DMCA") nekutumira fomu yakanyatso nyorwa-nyorwa chiziviso mukunyora kuna Sturai's akasarudzika kodzero mumiririri pa580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.
Kupindura kune DMCA Tora-Pasi Ziso. Kana Stumari ikaita chiito kupindura chikanganiso chekuzivisa, ichaita yakanaka kutenda kuyedza kubvunza bato iro rakaita kuti zvinhu izvi zviwanikwe kuburikidza neyezvino email kero, kana paine, yakapihwa neiyo bato kuna Stumari. Chero chipi zvacho chakakanganisa DMCA chiziviso chinogona kutumirwa kubato chakaita kuti zvirimo zvivepo kana kune wechitatu mapato akaita seChillEffects.org.
Nyika-Ziviso. Kana iwe uchitenda kuti yako Mushandisi-Yakagadzirwa Nzvimbo iyo yakabviswa kubva paWebhusaiti haisi kukanganisa, kana kuti iwe uine mvumo kubva kune muridzi we copyright, mumiriri wemuridzi we copyright, kana kutevedzera mutemo, kutumira nekushandisa izvo zvawakatumira. kune iyo Webhusaiti, unogona kutumira rakarongeka rinopikisa-chiziviso kuna Stumari rekuremera mumiriri uchishandisa ruzivo rwekutaura rwatarwa pamusoro apa.
Mhinduro kuDMCA Counter-Notices. Kana counter-chiziviso chikagamuchirwa namuzvinabhizimusi weStanka, Stumari anogona kutumira kopi yeanopikisa-ratidziro kumusangano wekutanga ari kunyunyuta achizivisa munhu akadaro kuti inogona kudzorera izvo zvakabviswa mumazuva gumi ebhizinesi. Kunze kwekunge muridzi we copyright abata danho rinotsvaga kodhi inopokana nemupi anopihwa, nhengo kana mushandisi, izvo zvakabviswa zvinodzoreredzwa paWebhusaiti mumazuva gumi kusvika gumi nemana ebhizinesi mushure mekutambira gwaro rekupokana.
Ruzivo rwePfuma Yepfungwa. Stumari inochengetedza zvese zveuridzi hwepfuma yedu yehungwaru, kusanganisira yedu ekuchengetedza, mapepa uye zviratidzo.
Hapana Chinjana. Stinzi inochengetedza muridzi wekodzero dzese dzepfuma dzerudzi chero rupi zvupi zvine chekuita neWebhusaiti nebasa, kusanganisira zvinyorwa zvinoshanda, mvumo, zviratidzo uye dzimwe kodzero dzekudyara. Zvimwe zvinotengesa, mamakisi ebasa, giraidhi uye marogo anoshandiswa zvine chekuita neWebhusaiti uye Iyo Sevhisi inogona kunge iri zviratidzo zvevamwe vanhu vechitatu. Chibvumirano ichi hachishande kubva kwatiri kuenda kwauri chero Stunzi kana wechitatu munhu wepfungwa zvivakwa, uye zvese zvakanaka, zita, uye kufarira mukati uye kune zvivakwa zvakadaro zvinosara (sepakati pemapato) chete nesu. Isu tinochengetera kodzero dzese dzausina kupihwa zvakajeka kwauri pasi pechibvumirano ichi.
Kunyanya, Stumari, Stumari.com, uye zvimwe zvese zviratidzo zvinoratidzika, zvinoratidzwa, kana zvinoshandiswa paWebhusaiti kana sechikamu cheShumiro chakanyoreswa kana zviratidzo zvemitemo zvakajairwa kana zviratidzo zveSevhara, Inc. Aya maratidziro haangateedzerwe. , kudhanilodha, kudhindwazve, kushandiswa, kushandurwa, kana kugoverwa nenzira chero isina mvumo yakanyorwa kubva kuStumari, kunze kwekuita sechimwe chikamu chezvepi zvirevo zvakatemerwa Zvemukati.
Email Kukurukurirana. Isu tinoshandisa email uye zvemagetsi nzira yekugara tichikurirana nevashandisi vedu.
Zvekufambiswa Kwemagetsi Zvinodikanwa. Nezve contractual zvinangwa, iwe (i) mvumo yekugamuchira nhare kubva kuStumari mune fomu yemagetsi kuburikidza nekero yeemail iyo iwe waendesa kana kuburikidza neSevhisi; uye (ii) bvuma kuti yese Mitemo Yekushandisa, zvibvumirano, zviziviso, kuburitswa, uye kumwe kutaurirana kunopihwa naStotti newe zvemagetsi zvinogutsa chero chinodiwa chepamutemo icho kutaurirana kwakadaro kwaizogutsa dai kuri kunyora. Ichi chikamu hachinei nekodzero dzako dzisingarasikirwe.
Chomutemo Chiziviso Kuti Stikiri Inofanirwa Kuva Mukunyora. Mataurirwo akaitwa kuburikidza neemail kana iyo sevhisi yakasarudzika messaging system haizori chiziviso chepamutemo kuna Stumari kana chero wevatariri vedu, vashandi, vamiririri kana vamiriri mune chero mamiriro ezvinhu apo chiziviso kuna Stikiri chinodikanwa nechibvumirano kana chero mutemo kana mutemo.
Kuguma. Unogona kukanzura Chibvumirano ichi uye kuvhara account yako chero nguva. Kubviswa kweSevhisi Service hakuregere kugweta-hukama hwevatengi kana zvisungo.
Unogona Kupedza Chibvumirano ichi. Kana iwe uchida kusimudza Chibvumirano ichi kana account yako neSevhisi, unogona kungorega kushandisa Stikiri. Kana iwe uchida kudzima yako yeAkaunti account data, ndokumbirawo ubate Stumari pa info@Stumari.com. Tichachengeta uye toshandisa ruzivo rwako sezvazvinodiwa kutevedzera zvisungo zvedu zvepamutemo, kugadzirisa makakatanwa, uye kusimbisa zvibvumirano zvedu, asi tichidzivisa zvinodiwa zvemutemo, tinodzima nhoroondo yako mukati memazuva makumi matatu.
Stinzi Mai Kupedza Chibvumirano ichi. Stumari inogona kumisa kuwana kwako kune vese kana chero chikamu cheWebhusaiti chero nguva, uine kana pasina chikonzero, uine kana pasina ziviso, unoshanda nekukurumidza.
Zvehukama pakati peGweta Uye Mutengi Kupukunyuka Kubviswa. Kubviswa kwehukama hwako naStamara hakukuchina hukama hwako newese mupi wezano kana mutengi wawakachengeta kuburikidza neStanka Service. Zvese zvepamutemo, zvibvumirano, uye zvetsika mabasa, zvisungo nemitoro zvinorarama nekugumiswa kwehukama hwaSisitiri.
Dzimwe Huro dzinoponesa Kubvisa. Zvese zviga zvechibvumirano ichi izvo nemasikirwo azvo zvinofanirwa kurarama nekumiswa zvichapona kubviswa, kusanganisira, pasina muganho, zvigadziro zvemuridzi, waranti yekuzvituka, kuregererwa uye kusakwana kwemhosva.
Kubhadhara uye Kuchinjana.
Kubhadhara Maitiro. Kubhadhara kunozoitwa sekutsanangurwa muchirongwa uye / kana invoice uye kwakabvumiranwa neMutemo Mutengi uye Muongorori Anoshandisa. Kana Jobho (kana chikamu chake sezvakambobvumirwa kunyorwa neyeMutemo Mutengi neMushandisi weChishandiso) chikanyorwa sekuzadziswa kweMuvhenganisi weVashandisi, Stikiri inokwazisa Mutengi wemitemo kuti Jobho (kana chikamu chayo sezvakambotenderanwa. mukunyora neMutemo Mutengi uye Muvhenganisi WeMushandisi) zvakwana. Mutongi wemitemo anofanira kubva abhadhara mari yakatowiriranwa kana kukumbira shanduko. Kana Mutengi wemitemo asina kutora danho mushure memazuva gumi, Stumari achave nekodzero yekubhadhara Kodhi yeMatare kiredhiti kadhi, account kubhengi, kana PayPal account yekuzara kwemari yakabvumiranwa kana inisisi isina kubvumidzwa, kusanganisira basa kana kugadzirisa muripo. Iye Mutengi weMutemo anogona kuendesa makakatanwa pamusoro pekubhadhara info@Stumari.com chero iye achiomerera kune mamwe mamiriro akatarwa muChikamu 10 (Legal Client-Consultant User Dispute Resolution Matanho).
Basa rekubhadhara. Iwe ndiwe unobatsira pamabhadharo ese, kusanganisira mutero, sevhisi, uye yekubhadhara mari, inoenderana nekushandisa kwako kweSevhisi. Nekushandisa iyo Sevhisi, unobvuma kubhadhara iye Anobvunzira Mushandisi kuburikidza neStinin iyo mari yakabvumiranwa muBhiri kana unsisputed invoice, uye yakabatana nebasa uye kugadzirisa mubhadharo, kunze kwekunge iwe uchikakavadza invoice nekutumira email kune info@Stumari.com uye unotevedzera kune mamwe mamiriro akatarwa muChikamu 15 (Legal Client-Consultant User Dispute Resolution Matanho). Iwe unozvidavirira kutipa nzira chaiyo yekubhadhara.
Kuzvidavirira kwaStage. Stumari inobvuma kukupa iwe neinvoice yakazara yechaji yega yega pamberi pekubhadhara kiredhiti kadhi rako kana PayPal account. Stumari inobvuma kubhadhara iyo inoshanda Anobvunza Mushandisi iyo mari yakagashirwa, kushoma kwesevhisi kana kugadzirisa michina, kana paine.
Kubvumidza Kubhadhara. Nekubvuma kune aya mazwi, uri kupa Stikiri mvumo yekubhadhara yako-faira kadhi rechikwereti, PayPal account, kana dzimwe nzira dzakabvumirwa dzekubhadhara mari inobhadharira Stikira kugutsa. Zvichienderana nebasa rako reBida, Stikiri inogona kukubhadhara pane imwe-nguva kana inodzokororwa. Iwe unopa mvumo Stoncho yekubhadhara mari izere inokweretwa kune chero Webvunzurudza Mushandisi kuburikidza neSevhisi, pamwe neanenge aripo masevhisi uye mashandiro anoita. Kuti udzivise kusahadzika, muchiitiko icho mune imwe nhambo muongorori Anoshandisa Mushandisi anongoshandisa maSevhisi kukuisa invoice iwe yezviitiko zvemitemo zvisiri izvo izvo zviri nyaya yeBi, nekuisa kiredhiti kadhi rako kana PayPal account pane faira neStumari kana yedu yetatu yekubhadhara processor, iwe unobvuma uye unobvuma kuti mazwi ekubhadhara ataurwa muChikamu ichi 12 achashanda.
Verified Ane Mano Mushandisi Akabhadhara Guarantee. Stumari inovimbisa kubhadhara kwega yega Verified Consultant Mushandisi invoice yekupedza Mabasa (kana sekisheni yacho sezvakambobvumwa mukunyora nePamutemo Mutengi uye Muvhenganisi weChishandiso) kune Vatengi vemitemo (Stumari's "Musana wekubhadhara Guarantee"), zvichienderana neiyo anotevera mazwi uye mamiriro (iyo "Yakabhadhara Payment Guarantee Mamiriro ezvinhu"):
Mutongi wemitemo akatadza kugutsa invoice yeVakagadziriswa (iyo dhora remari yakadaro, iyo "Mari Isina Kubhadharwa") panopera zuva regumi (gumi) pakarenda mushure meinvoice yaiswa (rakadai zuva, " ZveMutemo Mutengi Kubhadhara Zuva Rakafanira ”).
Verified Consultant Mushandisi akaendesa kuna Stumari chikumbiro chakanyorwa cheUngabhadhara Invoised Amount (i) mukati memakumi maviri nerimwe (21) karenda zuva, kutanga pazuva rinotevera Mutemo weVatengi Yekubhadhara Kwakafanira Zuva (nguva yakadai, Mupi weKubvunzurudza Kombi Yekutumira Nguva ”) uye (ii) inopa mune zvakadzama chokwadi uye mamiriro ezvinhu aJobho, kusanganisira chero chirevo chakapihwa neMutemo Mutengi nezvekutadza kwake kubhadhara kwakadai uye / kana chero ruregerero gweta rinogona kuita zvakanaka. kutenda kufunga pamusoro pekuti sei mutengi aramba kubhadhara (chikumbiro chakadai, "Mari Yakabhadhara Yekubhadhara Guarantee Chikumbiro"). Kukundikana kuendesa Chimiro Chekubhadhara Guarantee Chikumbiro mukati meVakavimbika Veruzivo Mvumo Yekutumira Nguva yekumisidzana kuchaumba vakadaro Mubatsiri weMusengi anogamuchira zvachose kodzero yake yekugamuchira Chibhadhariso Chisingabhadharwe Inovhenekerwa kubva kune chero munhu kana chinhu, kusanganisira Stumari neMutemo Mutengi. Kusvika padanho iro Sinzi anofunga mukati mayo ega uye nemhedziso yesarudzo kuti zvine mukurumbira kuzviita, inogona kuenderera mberi nekuedza kwekuunganidza neMutemo Mutengi uye kana ikabudirira, iye Akasimbiswa Anopa Mvumo anogamuchira ake / ake chikamu cheyo huwandu hwakaunganidzwa. kubvisa chero akajeka Stumari kunze-kwe-muhomwe mari yekushandisa, uchitevedzera 12.e pamusoro.
Muchiitiko icho Verified Consultant Mushandisi anoendesa Unobvumirwa Kubhadhara Guarantee Chikumbiro mukati meVakavimbiswa Mupi Mushandisi Kureta Kupa Nguva, uye chikumbiro chakadai chine ruzivo rwatarwa muchikamu 14.b. pamusoro, Stinzi ichaedza nekutenda kwakanaka kushanda neyeMutemo Mutengi uye Akagadziriswa Anobvunza Mushandisi kwenguva inosvika manomwe (7) mazuva ekarenda kubva pazuva rePasipiti Yekubhadhara Guarantee Chikumbiro (nguva yakadaro, iyo "Kubhadhara-Kuenderana Disputed Matter Mediation Period ”) kugadzirisa nyaya inova nyaya yeiyo Dhipiro Yekubhadhara Guarantee Chikumbiro (iyo" Kubhadhara-Kwakaenderana Disputed Matter "). Muchiitiko icho iyo Payment-Inoenderana Disputed Matter inogadziriswa zvakabudirira mukati meMubhadharo-Yakabatana Disputed Matter Mediation Period, yega yePamutemo Mutengi, Verified Kukurukurirana Mushandisi uye, kana zvakakodzera, Stikiri inotora zvakabvumwa pane matanho ekuita zvakabvumiranwa-pa. resolution.
Muchiitiko icho Kubhadhara-Kwakaenderana Disputed Matter kuchiramba kusingagadziriswe pakupera kwePayment-Yepakati Dispakati Matter Mediation Nguva, pasati papfuura zuva rechinomwe (rechinomwe) rekarenda mushure mekupera kwePayment-yakabatana Disputed Matter Mediation Nguva. zuva kutsanangurwa kwakadai kuchinyoreranwa kunyorwa kuMutemo Mutengi uye Neruzivo rweMashandisi Akasarudzika, iyo "Stumari Disputed-Amount Determination Date"), Stikiri ichaita chisarudzo mukufunga kwayo uye kwayo (the "Stumari Disputed Matter Isarudzo"), yakavakirwa iyo ruzivo iripo yakapihwa neVakagadziriswa Mupi weVashandisi uye, kana ikapihwa, Mutengi weMutemo, kana chimiro uye mhando yevemabasa ehupamhi yakapihwa zvine chekuita neJobhusi ichienderana nemayero eindasitiri, izvo zvinopihwa iyo Bhiri inoenderana uye iyi Mitemo uye Mamiriro. Kana Stumari ikagona kusarudza iyo yekubhadhara-yakabatana Disputed Matter inofarira yeAkagadziridzwa WeMubatsiri Mushandisi, Stikiri anofanira kudzorera iyo Asina kubhadharwa Invoised Amount kune Akavhenekwa Ane Mano Mushandisi mukati memazuva manomwe (7) yekarenda mushure meStumari Disputed-Amount Determination Date, uye Akafambiswa WeMubatsiri Mushandisi. achatorwa seakagovera kodzero dzake dzese maererano nePayment-yakabatana Disputed Matter kuna Stumari. Pasinei nechinhu chero chakataurwa apa kana kuti zvimwe zvinopesana, iyo dhora rakatsvaga pasi pechikamu ichi 7 haringapfuure mari yakatanga kubvumiranwa pakati peMutemo Mutengi uye Neruzivo rweMuridzi Weruzivo maringe nekwaJobvu kana imwe mari yakazobvumiranwa mutsamba inosainwa chibvumirano chakanyorwa pakati mapato
Kana Stumari ikaita sarudzo yekubhadhara-inosangana neyeMutemo inomiririra Mutengi, Mutengi wemitemo haachafanirwa kubhadhara mubhadharo weakaunzi musina kubhadharwa uye muchafungidzirwa kuti ndiye akapa kodzero yake. zvine chekuita nePayment-Yakanangana neDispute Matter kuenda kuStumari seiyo yeStumari Disputed-Amount Determination Date. Muchiitiko chakadai, Verified Consultant Mushandisi (i) achanzi abvise kodzero yake yekutsvaga mari dzakadai kubva kuMutemo Mutengi, uye (ii) ane kodzero yekutanga kuita zvisungo zvekupokana zvine chekuita neiyo Mari Yakabhadharwa Invoised. Stumari iyo yakaenzana neyaya mafambiro akambotaurwa muChikamu 21.d. heino (Arbitration) nekupa Stumari chiziviso chakanyorwa chekuita kwake kodzero mukati megumi (10) karenda mazuva mushure mekupera kweStumari Disputed-Amount Determination Date (nguva yakadai, "Kubhadhara-Dispute Arbitration Election Nguva Period" . Muchiitiko icho Mushambadzi Akasimbiswa Anoshandisa haashandisi kodzero yake yekutanga kukwikwidza mafambiro panguva yePayment Dispute Arbitration Election Time Period, iye achanzi abvise zvachose kodzero yake yekubhadhara mari isina kubhadharwa.
Stinzi anofanira kuziva here kuti Mutengi uri pafaira kiredhiti kadhi kadhi, PayPal account, kana dzimwe nzira dzakabhadharwa dzekubhadhara haisisiri kushanda, kana Stikiri aziva kuti Mutengi, zviri kunze kwechikonzero, haadi kana kutadza kubhadhara. yeiyo Jobho, kana chero imwe Job kana isina kubhadharwa Invoice paStumari, Stinzi ichazivisa iyo Mutengi Mutengi's Verified Consultant Mushandisi / Vashandisi yenyaya inogona kuitika ine chekuita nekubhadhara (pano "Chiziviso"). Ese masevhisi akaitwa neVakagadziriswa Anobvunza Mushandisi pamberi peChiziviso anoiswa pasi pe "Yabhadhara Payment Guarantee," asi masevhisi ese anoitwa neVakagadziriswa Mupi weVashandisi anotevera mushure meZiviso haasi kuzoiswa pasi pe "Yabhadhara Payment Guarantee." Kana iyo Verified Consultant Mushandisi akaisa invoice kuMutemo Mutengi kune masevhisi anoitwa anotevera Chibvumirano, Stikiri achiri kuzoita kuunganidza kubhadhara kweavo masevhisi akaitwa neakagadziriswa Ane Mupi Mushandisi.
Kwemutemo Vatengi Muchiitiko icho Mutengi wemitemo ane kutenda kwakanaka kwekutenda kuti chimiro kana mhando yemabasa epamutemo anopihwa neVakagadziriswa Mupi weVashandisi maererano neJobho inoenderana haaenderane neindasitiri zviyero kana zvinopihwa neBig inoenderana kana iyi Mitemo uye Mamiriro ezvinhu, kana mari yakaderedzwa kumabasa epamutemo akapihwa neAdvent Anoshandisa aya haaenderane neBid (nyaya iyi, "Services-Yakanangana neDambudziko Rakagadziriswa"), iye anofanirwa kubvumidzwa kubvumidza kubhadhara chero mari inopokana iri musoro wenyaya yakadai (iyo "Yakabhadharwa Mari Kubhadhara"), zvichienderana nemamiriro ezvinhu anotevera (iyo "Iyo Yakabhadharwa Mari Kubhadhara Mamiriro ezvinhu"):
Mukati memazuva gumi (10) yekarenda yemazuva eiyo invoice yakabatana (nguva yakadaro, iyo “Mutemo weVatengi veChisimba Mutemo”), Mutongi wemitemo achapa chiziviso chakanyorwa kuna Stikiri kunyatsoburitsa chokwadi uye mamiriro ezvinhu ari hwaro. yeSevhisi-Inoenderana Nenyonganiso Matter (imwe neimwe, "Services-Inoenderana Dispute Chiziviso"). Kutadza kweVatengi veMutemo kuendesa Chinyorwa -Kuenderana Dispute Chiziviso mukati meMutemo Client Disputeaziso Nguva ichaita mutongi wemitemo zvachose kune kodzero yake yekupokana neAneheld Payment Amounts, iyo mari ichapihwa kune Mutemo weMutengi. kiredhiti kadhi, PayPal account, kana dzimwe nzira dzakatenderwa dzekubhadhara zvinoenderana neSaiti 13.d. yeiyi Mitemo yekushandisa.
Muchiitiko icho Mutengi wemitemo anounza Services-Inoenderana Dispute Chiziviso mukati meMutemo Client Dispute ziviso yenguva, uye chikumbiro chakadai chine ruzivo rwatarwa mubumbiro remutemo 15.a. pamusoro, Stinzi ichaedza nekutenda kwakanaka kushanda neyeMutemo Mutengi uye Akagadziriswa Anotsvaga Mushandisi kwenguva inosvika gumi neshanu (15) mazuva ekarenda kubva pazuva reSevhisi-Rinoenderana Dispute Cherechedzo (nguva yakadaro, iyo "Services-Inoenderana Dispute Matter Mediation Period ”) kugadzirisa iyo maSevhisi-Inoenderana Neshambadziro Matter. Muchiitiko icho Services-Inoenderana Disputed Matter inogadziriswa zvakabudirira mukati meSevhisi-Inoenderana Disputed Matter Mediation Period, yega yega Mutemo Mutengi, Verified Muchengeti Mushandisi uye, kana zvichikodzera, Stikiri anotora zvakabvumwa pane matanho ekuita zvakabvumiranwa-pa. resolution.
Muchiitiko icho Services-Yakanangana Disputed Matter inoramba isina kugadziriswa pakuguma kweProblems-Inoenderana Disputed Matter Mediation Nguva, pasati papfuura zuva regumi nenana (14) rekarenda yapera Service ichaita danho musarudzo yayo yega uye yakakwana (iyo "Stinzi Services-Yakanangana Nenyaya Isarudzo Chisarudzo"), uye zvichibva paruzivo rwacho zvinopihwa neMutemo Mutengi uye Akagadziridzwa Muongorori Mushandisi, nezvehunhu uye kunaka kwemasevhisi epamutemo. yakapihwa maererano neJob iyo iri iyo nyaya yeSevhisi-Inoenderana Disputed Matter yaienderana nemaindasitiri zviyero, izvo zviga zveBin zvinoenderana uye izvi Zvirevo neMamiriro. Kana Stumari ikagona kusarudza iwo maSevhisi-Akanangana neDispute Matter achifarira uyo Akagadziriswa Muvhengi Mushandisi, Mutemo weMutemo unosungirwa kubhadhara iyo Yehukamire Kubhadhara Maakaundi kune Akadai Anobvunza basa mukati menguva nomwe (7) yekarenda yezuva mushure mezuva rakadai. Mutengi Wepamutemo anoziviswa nekunyora kweStatula Services-Yakanangana neDispute Matter Sarudzo (iyo "Stumari Services-Yakanangana Nenyaya Chisarudzo Chisarudzo"). Muchiitiko icho Mutengi wemitemo akatadza kubhadhara nenguva, Stumari anozobhadhara iyo Yakabhadharwa Mari dzeMabhadharo kuMushandisi Akasimbiswa Weanopa uyo anozopa kodzero yake yekudzorera mari dzakadaro kuna Stumari iyo inogona, nenzira kwayo, kuita mubhadharo zvichiteedzera. kuChikamu 13.d uye / kana kusarudzwa kuti vatevedzere kodzero dzayo uye mishonga yekurwisa Mutengi weMutemo.
Kana Stinzi akagona kusarudza masevhisi-Akanangana neDzishorwa Mutemo achifarira Mutengi, Mutemo haichazobvumirwi kubhadhara iyo Inobhadharwa Mari dzeMubhadharo kuMuridzi Weruzivo Akasarudzika uye achanzi anopihwa kodzero yake yese. zvine chekuita neDziviriro-Zvinoenderana Disputed Matter kuna Stumari. Muchiitiko chakadai, Verified Consultant Mushandisi (i) achanzi abvise kodzero yake yekutsvaga mari dzakadai kubva kuMutemo Mutengi, uye (ii) ave nemvumo yekutanga matanho okusungisa zvine chekuita neAneheld Payment Amounts kupesana Stumari iyo yakaenzana neyaya mafambiro akambotaurwa muChikamu 21.d. seizvi (Arbitration) nekupa Stumari chiziviso chakanyorwa chekuita kwake kodzero mukati memazuva gumi (10) yekarenda mushure memazuva eSevhisi-Yakanangana Nenyaya Yekutonga Matanho Sarudzo (nguva yakadaro, iyo "Maitiro-Inoenderana Arbitration Election Nguva Nguva. "). Muchiitiko icho Mushambadzi Akasarudzika Mushandisi akashandisa kodzero yake yekutanga mafambiro ekupokana panguva yeSevhisi-Inoenderana Arbitration Election Nguva Pure, iye achanzi abvise zvachose kodzero yake yekubhadhara maNeheld Payment Amounts. .
Muchiitiko icho Verified Consultant Mushandisi uye Mutengi weVatengi vemitemo vakawana nguva yakakodzera kodzero dzakarongwa muChikamu 14 uye Chikamu 15, mafambisirwo ataurwa muChikamu 15 anotungamira pane mafambisirwo ataurwa muChikamu 14 uye Mushandisi Akasimbiswa Anopa mazano anobvuma kudzima zvachose kodzero yake yekutevera kodzero yake inorongwa muChikamu 13 zvine chekuita nezvechokwadi uye mamiriro ari pasi peiyo Payment-Inosanganisira Disputed Matter.Mafambisirwo ataurwa muChikamu chino 15 anozotaurwa nezvawo seizvi. "Zvimwe Zvikonzero Zvekugadzirisa Matanho".
Kuzvidzivirira kweZvimbiso. Isu tinopa sevhisi yedu sezvazviri, uye hatiite zvipikirwa kana vimbiso nezvevhisi ino. Ndapota verenga chikamu ichi nokungwarira; iwe unofanirwa kunzwisisa zvaunofanira kutarisira.
Stinzi inopa iyo Webhusaiti uye seShumiro "sezvazviri," isina warudzi rwe chero mhando. Pasina kudzora izvo zvave kumberi, Stikiri inonyatsoratidza zvese waranti, ingave inotsanangurwa, ichitsanangurwa kana kuverengerwa pamutemo, maererano neWebhusaiti neIsevhisi iyi kusanganisira, pasina muganho, chero waranti yemubvumirano yekutengesa, kurongeka kwechinangwa chakati, zita, kuchengetedzwa, kunyatsojeka uye kusaputsa.
Kunyanya, Stikiri haigone kumiririra kana waranti iyo iyo ruzivo rwatinopa kana iyo inopihwa kuburikidza neSevhisi iri chaiyo, yakavimbika kana yakarurama; kuti Service inosangana nezvido zvako; kuti iyo Sevhisi ichave iripo chero nguva kana nzvimbo, kuti iyo Sevhisi ichashanda nenzira isina kukanganiswa kana kuve yakachengeteka; kuti chero kukanganisa kana kukanganisa kucharuramiswa; kana kuti Service haina mavhairasi kana zvimwe zvinhu zvinokuvadza. Iwe unofungidzira zvakazara mutoro uye njodzi yekurasikirwa inokonzerwa nekushandisa kwako ruzivo, zvemukati kana zvimwe zvinhu zvinowanikwa muSevhisi. Dzimwe nzvimbo dzinodzora kana hadzibvumidze kudzikisira kwew waranti, saka izvi hazvigone kushanda kwauri.
Kurambidzwa kweMhosva. Hatisi kuzobhadharirwa kukuvadza kana kurasikirwa kunobva mukushandisa kwako masevhisi kana kusimuka pasi pechibvumirano ichi. Ndapota verenga chikamu ichi nokungwarira; zvinogumira pamisungo yedu kwauri.
Kusvika pamvumo inobvumirwa nemutemo unoshanda, mune chiitiko hapana Stumari ichave nemhosva yako kune chero kurasikirwa kweenzuzo, kushandiswa, kana data, kana chero chiitiko, chisina kunanga, chakakosha, chakakonzerwa kana chakakanganisika kukuvara, asi zvichikwira, zvinokonzerwa ne (i ) kushandiswa, kuburitswa, kana kuratidzwa kweMushandisi Wako-Wakagadzirwa Zvemukati; (ii) kushandisa kwako kana kusakwanisa kushandisa iyo Service; (iii) iyo Sevhisi kazhinji kana software kana masisitimu anoita kuti Service iwanikwe; kana (iv) kuita chero chinhu chakabatana naStumari kana chero mumwe mushandisi weSevhisi, ingave yakavakirwa pane warandi, chibvumirano, kurwiswa (zvinosanganisira kushaya hanya) kana chero imwe pfungwa yepamutemo, uye kana Stikiri akaudzwa nezve mukana wekukuvara uku, uye kunyangwe kana mushonga wakatemwa muchibvumirano ichi ukawanikwa wakundikana pachinangwa chayo chakakosha. Stumari haingave nemhosva kune chero iko kukundikana kana kunonoka nekuda kwezvinhu zvinopfuura kwedu kutonga zvine musoro. Dzimwe hutongi dzinogumisa kana hadzibvumire vanoregedzeswa mhosva, saka gadziriro iyi inogona kusashanda kwauri.
Chechitatu Party Vanowana. Vashandisi veAvhenekeri vanoitirwa chinangwa chechitatu-mubatsiri wechikamu ichi cheMitemo yeKushandisa. Chero ruzivo rwepamutemo rwunopihwa paSevhisi nderwe ruzivo ruzivo chete. Stumari uye chero mugadziri weMushandisi-Inogadzirwa Zvemukati zvine ruzivo zviri pamutemo discounts zvese mvumo, ingave inoratidza kana kutaurwa, zviri pamutemo kana neimwe nzira, zvinosanganisira asi zvisingapfuurirwe kune akafungidzirwa waranti ekutengesa, kusakanganisa kodzero dzechitatu, uye kusimba kwechinangwa chakati. , kusvikira kuzere kwazvo kwakabvumidzwa nomutemo. Hapana chiitiko chichaitika kuti Stumari kana kuti Anobvunza Mushandisi ave nemhosva kune chero kukuvara (kusanganisira, pasina kumuganhurira, zviitiko uye zvakakonzera kukuvara, kukuvara iwe pachako / kufa zvisizvo, kurasikirwa purofiti, kana kukuvara kunokonzerwa nekurasa data kana kukanganisa kwebhizinesi) zvichikonzerwa nekushandiswa kana. kutadza kushandisa iyo Service kana iyo Mushandisi-Inogadzirwa Zvemukati, kungave kwakavakirwa pawarandi, chibvumirano, kurwiswa, kana chero imwe pfungwa yepamutemo, uye kana kana Stikiri kana vanopa kweMusarudzo-Inogadzirwa Yenyaya vanopihwa nezvekukuvara kwakadai. Kunyange Stumari kana vanopa kweMushandisi-Vanogadzirwa Zvemukati vane mhosva yekukuvara kwega, kusanganisira kufa, kunokonzerwa nekushandisa kwako kana kushandisa zvisizvo kweSevhisi kana Mushandisi-Wakagadziriswa Zvemukati.
Kusunungurwa uye Kubvumidzwa.
Unobvuma kureverera uye kubatirira zvisina njodzi Stikiri kubva uye kupokana chero uye zvese zvinoda uye mari, kusanganisira mari yemagweta, zvichikwira kubva mukushandisa kwako Webhusaiti uye neSevhisi, kusanganisira asi isina kugumira pakukanganisa kwako chibvumirano ichi.
Kana iwe uine kukakavara pamwe neUsers kana vashandisi, iwe unoburitsa Stumari kubva pazvikumbiro, zvinodiwa uye zvakakanganisika (chaiyo uye yakakonzera) yerudzi rwese uye zvisikwa, inozivikanwa uye isingazivikanwe, ichibuda kunze kana neimwe nzira yakabatana nemakakatanwa akadaro. Kana iwe uri mugari weCalifornia, iwe waive California Civil Code §1542, iyo inoti: "Kuburitswa kwakawanda hakuwedzere kune izvo zvinonzi iye wechikwereti iye asingazive kana kufungidzira kuti aripo munyasha yake panguva yekuburitsa, izvo kana kuzivikanwa naye kunofanira kunge kwakakanganisa kugara kwake nechikwereti. "
Kugadziridzwa kweMitemo yekushandisa. Stinzi inogona kugadzirisa Chibvumirano ichi nguva nenguva, uye mukufunga kwese kwaStage. Isu tinopa chiziviso kuneVashandisi vekushanduka kwezvinhu muchibvumirano ichi (i) nekutumira ziviso kune kero yekutanga yeemail yakatsanangurwa muakaunti yako, iyo inozoshanda nekukurumidza pakutumira kwedu email iyi, uye / kana (ii) kuburikidza newebsite yedu. mazuva makumi matatu isati yasvika shanduko inotora mukutumira chiziviso papeji redu rekumba. Kusachinja-kwezvinhu izvi Chibvumirano ichi kunozoitika nekukurumidza. Isu tinokurudzira vashanyi kuti vatarise tsamba iyi kana paine shanduko kuChitenderano ichi. Kuenderera mberi kwako kweSevhisi mushure mezuva rinoshanda reiyo yakagadziridzwa vhezheni ino inokanganisa kugamuchira kwako mazwi.
zvakasiyanasiyana. Chibvumirano ichi chinodzorwa nemutemo weCalifornia. Iwe, uye iwe wega, ndiwe unozvidavirira pane chero zvisungo zvaunobvumirana pasi pechibvumirano ichi. Kana isu takabatanidzwa mukubatanidzwa kana isu tatengwa, tinogona kuchinjisa Ichi Chibvumirano, chero kodzero dzenyu dzadzivirirwa. Iwe unogona chete kubvuma kune aya mazwi kana iwe uchikwanisa kuumba chibvumirano chinosungwa mudunhu rako. Aya mazwi, anosanganisira yedu Yavanzika Policy, chibvumirano chakakwana pakati pedu, uye hapana mamwe mazwi anoshanda.
Mutemo Unotonga. Kunze kwekunge iwo mutemo uchishanda unopa neimwe nzira, Chibvumirano ichi pakati pako naStagei uye chero chekuwana kana kushandisa Webhusaiti kana sevhisi chinotongwa nemitemo yemubatanidzwa yeUnited States of America nemirairo yeHurumende yeCalifornia, pasina hanya. kupokana kwemirairo yemutemo. Iwe naStumari unobvumirana kuendesa kune yakasarudzika kutonga uye nzvimbo yematare ari mune Guta uye County yeSan Francisco, California, kunze kwekunge zvapihwa pazasi muchibvumirano ichi.
Severability. Kana chero chikamu cheichi Chibvumirano chakabatwa chisina kunaka kana kusimbiswa, chikamu icho chechibvumirano chinozonzi chakaratidza chinangwa chemapato. Zvikamu zvakasara zvicharamba zviri musimba rakazara uye zvichita. Chero kutadza kuri kwechikamu cheSisitiri kumanikidza chero kupi kupi kweichi chibvumirano hachizoongororwa semubvumo wekodzero yedu yekumanikidza kupiwa kwakadaro. Dzedu kodzero pasi peChitenderano ichi dzichapona chero kubvisa chibvumirano ichi.
Kuderedzwa kweNguva Yekuita. Iwe unobvuma kuti chero chikonzero chezviito zvine chekuita kana kusimuka kubva muukama hwako naSisitiri chinofanira kutanga mukati megore rimwe mushure mechikonzero chekuita chiito. Zvikasadaro, chikonzero chakadai che chiito chinorambidzwa zvachose.
Kukakavara. Kana kukakavara kukamuka pakati pako naStikira, tinoda kukupa nzira isina kwazvinobatsira uye inodhura yekugadzirisa gakava nekukurumidza. Naizvozvo, pane chero chirevo (kunze kwekunge zvikumbiro zvekukuvadza kana kusaenzana rubatsiro kana zvikumbiro zvine hungwaru hwepfuma kodzero) pasi pechibvumirano ichi, chero bato rinogona kusarudza kugadzirisa gakava ripi neripi rinomuka pasi peChibvumirano ichi kuburikidza nekusunga kusaratidzika-kwakavakirwa kukakavara. Bato rinosarudza kukwikwidza rinofanirwa kutanga naro kuburikidza neyakagadziriswa imwe gadziriso yekupokana ("ADR") muridzi anotenderana kubvumirana nemapato. Anopa ADR uye mapato acho vanofanirwa kutevedzera mutemo unotevera: (a) kusawirirana kuchaitwa, sarudzo yebato iri kutsvaga zororo, nerunhare, online, kana kungoenderana chete nezvinyorwa zvakanyorwa; (b) kukwikwidza hakungabatanidze kutaridzika kwevanhu nemapati kana zvapupu kunze kwekunge zvakabvumiranwa neimwe mapato; uye (c) chero mutongo pamusoro pemubhadharo wakapihwa neanopokana unokwanisa kupinda mudare chero ripi zvaro rekutonga.
Asingazivikanwe. Stumari inogona kugovera kana kutumira iyi Mitemo Yekushandisa uye / kana iyo Stumari Yemagariro Dziviriro, yakazara kana chikamu, kune chero munhu kana sangano chero panguva chero newe kana pasina mvumo yako. Iwe haugone kupa kana kupa chero kodzero kana zvisungo pasi peMitemo yeKushandisa kana Yakavanzika mutemo usati wabvumirwa naStumari, uye kupihwa kupi zvako kupihwa mvumo uye kutumwa newe kuri pasina.
Chikamu Misoro uye Pfupiso Kwete-Kusunga. Panguva yese iyi Chibvumirano, chikamu chimwe nechimwe chinosanganisira mazita uye zvipfupiso zveizvi zvinotevera mamiriro uye mamiriro. Idzi zvikamu zvemusoro uye zvipfupiso zvipfupi hazvisi pamutemo.
Chibvumirano chakakwana. Iyi Mitemo Yekushandisa, pamwe neiyo yeSecurity Policy pa https://www.Stumari.com/privacypolicy, inomirira chirevo chakazara uye chakasarudzika chechibvumirano pakati pako naStumari. Chibvumirano ichi chinoburitsa chero chirevo kana chibvumirano chepamberi pamuromo kana chakanyorwa, uye chero humwe kutaurirana pakati pako naStumari zvine chekuita nenyaya yechibvumirano ichi. Chibvumirano ichi chinogona kungoshandurwa nekunyorwa kwakanyorwa kwakasainwa nemutungamiriri weStatula, kana nekutumirwa naStumari yeshanduro yakagadziridzwa.
Mvumo kune Chibvumirano. Iwe unomiririra uye waranti yekuti kana uri wega, uri wezera repamutemo yekuumba chibvumirano chinosungwa; kana kuti kana iwe uri kunyoresa pachinzvimbo chesangano, iwe unobvumidzwa kupinda mukati, uye kusunga chisungo ku, aya Mitemo yekushandisa uye kunyoresa kweBasa.
Iwe unobvuma kuti iwe wakaverenga aya Mashandisiro Ekushandisa, nzwisisa Mitemo Yekushandisa, uye uchave wakasungwa neaya mamiriro uye mamiriro.